KwiCreek-side Cabin Downtown Boone - I-Airbnb
KwiCreek-side Cabin Downtown Boone
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguChristal
Ikhabhathi ehlaziyiweyo yeplanga ihlala ngasemva kwendlu yethu yasefama eyimbali kunye nendlu yeendwendwe kwinduli enemithi embindini wedolophu iBoone. Ikhabhathi ihlala kanye ecaleni komlambo kwaye inepatio yamatye yabucala encanyathiselweyo. Ipatio inomgodi womlilo, i-gas grill kunye nombono omkhulu we-creek epholileyo kunye nemithi. Olu seto lufana nendawo encinci efihliweyo yendalo efihliweyo-enye yeendawo ezimbalwa "ezidala zasekhaya" ezisekho kwiDowntown Boone.
Vula ifestile yegumbi lakho lokulala ukuze uve ukugeleza okuthambileyo komlambo kwaye mhlawumbi uthi krwaqu ixhama elilala phantsi kweliwa . Ikhitshi enkulu nehlaziyiweyo iqaqambile kwaye inelanga kwaye ikulungele ukupheka impelaveki. Ikofu, iti, igranola yasekhaya, iziqhamo kunye necreamer zonke zikhona. Igumbi lokuhlambela lihlaziywe ngokutsha, lineshawari entsha, ibhafu, isinki, kunye nemigangatho yomthi oqinileyo. Le ndlu ye-rustic enefenitshala ye-funky-artsy iya kukhuthaza icala lakho lokudala. Ubugcisa boqobo kunye nezinto eziqingqiweyo ezifunyenwe zihombisa igumbi ngalinye. Ukuba uziva unomdla wokudala ngelixa uhlala kwikhabhathi yethu, uya kuyonwabela itafile yethu yobugcisa, indawo yokupeyinta, ukuzoba, kunye nokuzoba; zonke izixhobo zobugcisa zinikezelwe. Ikhabhinethi igcinwe kakuhle, zonke iilinen kunye neetawuli zinikezelwa.
4.97 · Izimvo eziyi-278
Indawo esihlala kuyo izibhloko ezimbini ukusuka eKing Street. Kulula ukuhamba ngemizuzu emi-5 ezantsi kweSitrato saManzi kwaye ukwidolophu yaseBoone eneendlela ezisecaleni kwendlela yonke! Yonwabela iindawo ezithengisa utywala, iindawo zokutyela, iivenkile zekofu, kunye neegalari zobugcisa. Kuhlala kukho iimvumi ezinkulu ezidlala ecaleni kwendlela yedolophu yaseBoone okanye kwiveranda engaphambili ye "The Jones House" ngebhunga lethu lezobugcisa.
Umbuki zindwendwe ngu- Christal
Isitshixo siyakushiyelwa iindwendwe kwi hook ekhohlo kumnyango ongaphambili. Unxibelelwano luxhomekeke kwiindwendwe. Ukuba iindwendwe ziyasidinga, siya kufumaneka ngokufowuna okanye ngemiyalezo, kwaye iindwendwe zinokuhamba zisiya kwiveranda yethu engasemva kwaye zinkqonkqoze emnyango.
Isitshixo siyakushiyelwa iindwendwe kwi hook ekhohlo kumnyango ongaphambili. Unxibelelwano luxhomekeke kwiindwendwe. Ukuba iindwendwe ziyasidinga, siya kufumaneka ngokufowuna okany…